ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ Archives - Apannpyay
Home > ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
ခေါင်းအုံး… သင်အိပ်နေတဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကို သတိထားပါ..။ ဒီညပဲ မအိပ်ခင် အပေါ်ဖုံးကို ချွတ်ကြည့်ကြပါ။
ခေါင်းအုံး ခေါင်းအုံးတွေကို သတိထားပါ အသက်(36)နှစ် အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Stewart Arms ဟာ ကိုယ်လက်မအီမသာ... Read More
ဆီးချိုရောဂါအတွက် နောက်ဆုံးသတင်း ( ခရေရွက်လက်တစ်ဆုပ် ) တန်ဘိုးကြီးအင်္ဂလိပ်ဆေးတွေဝယ်ပြီးအမြဲမမှီဝဲနိုင်သူတွေအတွက်ပါ။ ခရေပင်ကခရေရွက်လက်တစ်ဆုပ်ပြုပ်။နံနက်စာစားပြီးရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်စာ။ ညနေစာစားပြီးတစ်ခွက်သောက်ရင်ဆီးချိုကိုထိန်းနိုင်တယ်ပြောပါတယ်။ ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်းမှာဝေယျာဝစ္စလုပ်နေတဲ့အဘတစ်ဦးမှာခြေမခလုတ်တိုက်မိရာကအနာမကျက်နိုင်ပဲခြေတရွတ်ဆွဲသွားနေတာ။ ဘုရားလာနေကျဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးကဆေးခန်းခေါ်စစ်ဆေးပေးရာဆီးချိုအဆင့်၁၂အထိတက်နေတယ်ပြောပါတယ်။... Read More
သင် ကိုယ်တိုင် အံ့သြသွားစေလောက်တဲ့ နာနတ်ရွက် တစ်ရွက်… အစက တကယ်မသိခဲ့ဘူး
March 15, 2018 Apann Pyay
နာနတ်တစ်ရွက် ဆေးစွမ်းထက် နာနတ်ပင်ဟာဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ် ကာလမှာ နာနတ်သီးရဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မြက်ပုံကို သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုနေကြတဲ့ သတင်းများ လည်းရှိနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးဖက်ဝင်တဲ့... Read More
March 9, 2018 Apann Pyay
ရေနွေးကြမ်း နှင့် နှလုံးခုန်ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း (ရေနွေးကြမ်း နှင့် နှလုံးခုန်ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း) ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ... Read More
March 8, 2018 Apann Pyay
ကျောက်ဆို ကြောက်ကိုမကြောက်တော့တာ သူရှိနေလို့ ခါးနာခါးအောင့်ဖြစ်နေတာအခုတော့ သူထွက်ကျလာခဲ့ပါပြီ အချိန်ကယနေ့ ည ၁၁နာရီ၁၀မိနစ်ခန့်ကဖြစ်သည်ဘယ်ဘက်က ခါးတစ်ခြမ်းကိုက်နေတာ နှစ်လသုံးလလောက်ရှိနေပါပြီ... Read More
မယုံဘူးဆိုရင် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲ တစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ်..။
လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲ တစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ်..။ ညောင်းငြာကိုက်ခဲသူများအတွက် ဆေးထိုးဆေးစား၊အနှိပ်အနင်းမလိုဘဲ လက်တွေ့သက် သာပျောက်ကင်းစေသောနည်းလေးအား... Read More
ကိုယ်သောက်နေကျ ဆေးတွေရဲ့ နာမည်အဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, RETARD, XL စသဖြင့် ရှိတာကို သတိထားမိပါသလား
March 7, 2018 Apann Pyay
ကိုယ်သောက်နေကျ ဆေးတွေရဲ့ နာမည်အဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, RETARD, XL စသဖြင့်... Read More
သွား ကျန်းမာရေး အတွက် ဂရုစိုက်ရမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
March 6, 2018 Apann Pyay
သွား ကျန်းမာရေး အတွက် ဂရုစိုက်ရမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ “သွား” ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။... Read More
လူတော်တော် များများ ကြိုက်ကြတဲ့ ဆေးဘဲဥ ဆိုတာကို (CENTURY EGG)ကို စားသင့်သလား ???
March 4, 2018 Apann Pyay
ဆေးဘဲဥ (CENTURY EGG)ကိုစားသင့်သလား ??? ဆေးဘဲဥကို century egg,preserved egg,hundred year egg,... Read More